Hack ( ခိုးယူ ) ခံထားရတဲ့ Account ကို Report လုပ်နည်း(Video Tutorial) | Online Service Center Myanmar -->
Hack ( ခိုးယူ ) ခံထားရတဲ့ Account ကို Report လုပ်နည်း(Video Tutorial)
အကောင့်အခိုးခံထားရပြီး ငွေညှစ်ခံနေရသူတွေ၊ PA အလုပ်ခံနေရသူတွေရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Hack ခံထားရကြောင်းကို Facebook Team ဆီကို ဝိုင်းဝန်းပြီး Report လုပ်ပြီး ကူညီပေးလိုက်ကြပါဦး။ ( အခြားသူတွေရဲ့အကောင့်တွေ ခိုးခံရတယ်ဆိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း Report လုပ်ပြီး ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ )
Hack ခံထားရတဲ့ အကောင့်တစ်ခုကို Report လုပ်ပြီးကူညီဖို့အတွက်
အရင်ဆုံး အဲ့ဒီအကောင့် Profile ( Timeline ) ကိုသွားပါ => https://www.facebook.com/welove.hanthi999queen
Profile ကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်ပါ အတိုင်း အဆင့် ( ၅ ) သာ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။
1. Message နောက်နားမှ More ( အစက်လေး3စက် ) ကိုနှိပ်ပါ။
2. Give Feedback or Report This Profile ကုိႏွိပ္ပါ။
3. I want to help ကုိ ႏွိပ္ပါ။
4. အောက်မှာ ထပ်ပေါ်လာတဲ့အထဲက Hacked ကိုထပ်နှိပ်ပြီး Send ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
5. Done ကုိႏွိပ္ပါ။
Hack ခံထားရတဲ့ အကောင့်ကို Report တင်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
အောက်ကနည်းကတော့ အပေါ်ကနည်းနဲ့အတူတူပါပဲ Phone ( ဟန်းဆက် )or OS ချင်း ( Android or iOS ) ကွာခြားတဲ့အခါမှာ
မြင်ရတဲ့ပုံစံက ကွာခြားတတ်လို့ အပေါ်ကအတိုင်းမပေါ်ပဲ အောက်ကအတိုင်းပေါ်လျှင် အောက်ကအတိုင်း Report လုပ်ပေးပါ။
2. Report ကုိႏွိပ္ပါ။
3. I want to help (Account Name) ကုိ ႏွိပ္ပါ။
4. I think someone else is using his account
အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီး Report လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်...
Account Hack ထားရကြောင်း Facebook Team က အမြန်သိရှိသွားစေတာမို့
အကောင့်ပြန်လည်ရရှိအောင် Recovery ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
တတ်နိုင်သလောက် Recovery လုပ်ပေးချင်ပေမယ့် ဘာ Data မှ မရှိတဲ့အတွက် Report လုပ်ပီးပဲ ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ ဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲ ဝိုင်းဝန်းပြီး Report လုပ်ပေးလိုက်ကြပါဦး။ ^_^
Edit လုပ် ထပ်ဖြည့်// အောက်တန်းစားခွေးသူခိုးတွေအနေနဲ့ အကောင့်ကို D ( Deactivate ) လုပ်လိုက် ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ လုပ်နေမှာသေခြာပါတယ်။ အကောင့်ပြန်တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ Report လုပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။ ;)
Han Thi - မော်ဒယ်လ် ( 10.5.2018 နေ့ Hack ခံရ )
လက်ရှိတော့ ဒီတစ်ယောက် Account ခိုးယူခံထားရပြီး။ ငွေညစ်ခံနေရလို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးလိုက်ကြပါဦး။
Ps : Hack ခံထားရတဲ့ အကောင့်တွေ့တိုင်းသာ ဒီနည်းလေးအတိုင်းကူညီပေးလိုက်ကြပါ။
[[ ကြည်ကြည်လင်လင်လေး ကြည့်ချင်လျှင် HD ကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ပါ။ ]]